မမေ့နိုင်သော ဂန္တ၀င် အမြောက်တပ်သားကြီးတစ်ဦး (အပိုင်း သုံး)	Gu Ru	Dennis Bergkamp (အပိုင်း ၃)
ဒန်းနစ်ဘားကမ့်ဟာ ၁၉၉၇-၉၈ ရာသီမှာတော့ သူ့ဘ၀ရဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အထူးခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်က အာဆင်နယ်အသင်းသည် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားနှင့် အက်ဖ်အေဖလားနှစ်ခုလုံး ရယူအောင်ပွဲခံခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်က အသက်၂၉နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဘားကမ့်သည် ၀င်ဘလေကွင်းတွင် ကစားသော အက်ဖ်အေဖိုင်နယ်ပွဲ အပါအ၀င် ရာသီကုန်ခါနီးပွဲစဉ်များကို လွဲချော်ခဲ့သော်လည်း အာဆင်နယ်အသင်း၏ အောင်မြင်မှုတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းဖလားနှစ်လုံးနှင့်အတူ ဘားကမ့်သည်လည်း ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာ ရရှိခဲ့လေသည်။ သူသည် အဆိုပါနှစ်အတွက် ကစားသမားများမှ ရွေးချယ်သော အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးချင်းအတွက် အမြင့်မားဆုံးဆု ဖြစ်သည်။ ဖီဖာ၏ တစ်နှစ်အတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား စာရင်းတွင် တတိယနေရာ ရရှိခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလတွင် ဘားကမ့်သည် တစ်လတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ဒုတိယအကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။ တစ်လာတာ အကောင်းဆုံးဆုကို နှစ်လဆက်တိုက် ရရှိသော ပထမဆုံး ဘောလုံးသမား ဖြစ်ခဲ့သည်။ BBC ရုပ်သံလိုင်းမှ တင်ဆက်သော Match of the Day ရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် တစ်လတာ အကောင်းဆုံးဂိုးများကို ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ဘားကမ့်၏ ဂိုးများသည်က ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အကောင်းဆုံးနေရာကို ရယူခဲ့လေသည်။ ၂၅နှစ်သက်တမ်းအတွင်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်ခံရခြင်း မရှိခဲ့ချေ။
အကောင်းဆုံး ပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့သောပွဲများ	thaunghtetmyatminn	အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အင်္ဂါနေ့ညတွင် ကစားခဲ့သော ရီးဒင်းနဲ့ပွဲဟာ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်တွေ တင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရီးဒင်းအသင်းကို သီအိုဝဲကော့ရဲ့ ဟက်ထရစ်ဂိုးနှင့် မော်ရွန်ချာမက်ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကြောင့် လေးဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ရာကနေ တစ်ခါမှ အနိုင် မရရှိဖူးခဲ့တဲ့ အနိုင်ရလဒ်တစ်ခုကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
မမေ့နိုင်သော ဂန္တ၀င် အမြောက်တပ်သားကြီးတစ်ဦး (အပိုင်း နှစ်)	Gu Ru	Dennis Bergkamp (အပိုင်း ၂)
ထိုကဲ့သို့ အောင်မြင်မှုများ ရယူခဲ့ပြီးနောက် ဘားကမ့်သည် အသင်းဖော် ၀င်းဂျုံးနှင့်အတူ အင်တာမီလန် အသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပြောင်းရွှေ့မှုကို နည်းပြဖြစ်သူ ဂျိုဟန်ခရိုက်ဖ်က သဘောမတူခဲ့ပေ။ ဘားကမ့်သည် အင်တာမီလန်အသင်း၏ ခံစစ်ဦးစားပေး ကစားကွက်နှင့် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဘားကမ့်ကလည်း ဒီလိုအပြောင်းအရွှေ့ကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က အေဂျက်အသင်းကဲ့သို့ တိုက်စစ် ဦးစားပေးကစားတတ်သော ဘာစီလိုနာနှင့် အေစီမီလန် ကဲ့သို့သော အသင်းများကလည်း သူ့ကို အလိုရှိခဲ့ကြသည်။ ခြေစွမ်းခြေစ ရှိသောဘားကမ့်သည် အင်တာအသင်းနှင့်အတူ ယူအီးအက်ဖ်အေ ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ အီတလီမြေတွင် နှစ်နှစ်တာမျှ ကစားခဲ့သည်။
နည်းပြဖြစ်သူ ဂျိုဟန်ခရိုက်ဖ် ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သလိုပင် အီတလီမြေသည် ဘားကမ့်အတွက် အောင်မြေအစစ် မဖြစ်ခဲ့ပေ။ အင်တာအသင်းက သူတို့၏ ကစားဟန်ကို ပြောင်းမည်ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့ မလုပ်ခဲ့ကြ။ ထို့ထက်ပို၍ ဆိုးဝါးသည်မှာ အသင်းဖော်များနှင့် ဆက်ဆံရေး မပြေလည်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ဆိုရသော် အသင်းဖော် ဥရုဂွေး တိုက်စစ်မှုး ယူဘန်ဆိုဆာသည် ဘားကမ့်ကို အသင်းဖော် တစ်ဦးထက် ပြိုင်ဘက်တစ်ဦး အနေဖြင့်သာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။
မမေ့နိုင်သော ဂန္တ၀င် အမြောက်တပ်သားကြီးတစ်ဦး (အပိုင်း တစ်)	Gu Ru	Dennis Bergkamp
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္တ၀င်တိုက်စစ်မှုး ဒန်းနစ်ဘားကင့်မ်ကို ၁၉၆၃ခုနှစ် မေလ ၁၀ရက်နေ့မှာ ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ် မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသားလေးယောက်အနက် အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ မန်ယူပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့ မိဘတွေက မန်ယူကစားသမား ဒန်းနစ်လောရဲ့ နာမည်ကို ယူပြီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူ့နာမည်မှာ n တစ်လုံးအပိုထည့်ပြီး Dennis ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘားကမ့်သည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘောလုံးတစ်လုံးနှင့် ခြံထဲတွင် ဆော့နေတတ်ပြီး ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ ဖြစ်ကြသော အကိုသုံးယောက်ကို လှည့်ပတ်လိမ်ခေါက် ကစားတတ်သည်။ သူ့ မိသားစုက မန်ယူပရိသတ်များ ဖြစ်ကြသော်လည်း ဘားကမ့်သည် ဂလန်ဟိုဒယ်လ်၏ ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပါရမီရှင် ကွင်းလယ်ကစားသမား Jack Wilshere	Sai Tun Nyi	ကျွန်တော် ဂျက်ကို စစသိချင်းတုန်းက ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘောလုံးရာသီ အစက ထင်တယ်၊၊ အဲတုန်းက ရာသီမစခင် emirate cup လုပ်နေတုန်းပေါ့၊၊ အဲဒီပြိုင်ပွဲက ရီးရဲလ်နဲ့ ကန်တဲ့ပွဲမှာ အာဆင်နယ် ဘယ်တောင်ပံက ကောင်လေးကို သတိထားမိတယ် ၊ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ ကစားအား တအားကောင်းတယ်ပေါ့၊ ပြီးတော့ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ မကြောက်မရွံ့ ကစားတတ်တယ်၊၊ ပိုပြီးထူးခြားတာက ဂျက်ဟာ အဲဒီတုန်းက ၁၆ နှစ်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်၊ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ထက် အသက် ၂ ဆကြီးတဲ့ ဆယ်လ်ဂါဒိုကို ကျော်ဖြတ် ကစားနေလိုက်တာ အားရစရာပါဘဲ၊၊ Read more... Comments (3)
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလနှင့် ကျွန်တော်၏အတွေးများ
စတိဗ်ဘိုးနဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါးတို့ ရဲ့ ထိန်းကွပ်မှုအောက်မှာလင်းလက်လာတဲ့ ဂျက်ကင်ဆန်
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page 8 of 44	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.